Ankadimbahoaka: hiakatra fitsarana ilay Karana | NewsMada
Ankadimbahoaka: hiakatra fitsarana ilay Karana
Par Taratra sur 27/12/2018
Hiakatra fitsarana, anio 27 desambra, etsy Anosy ilay Karana, tompon’orinasa eny Ankadimbahoaka, namono mpiasa, ny volana jolay lasa teo. Misy raharaha faharoa miandry azy koa, famonoana mpiasa ihany koa nitranga, ny volana novambra teo. Anisan’ny mpiasa nametraka fitoriana Ranaivoson Christophe, nilazany fa « maro ny mpiasa tratry ny daroka sy vono, saingy tsy sahy mitory, satria matahotra ny ho very asa ».
Lasa manana aretina torana matetika ity lehilahy, 52 taona, ity, taorian’ny vono nahazo azy ny 6 jolay teo. “Asa tsy nifanarahana tany am-boalohany no nampanaovina ahy, nandà izany ny tenako ka nanaovan’ny Karana miisa telo vono tambabe”, hoy izy. Tsy nahatsiaro tena izy ary efa tany ivelan’ny toeram-piasana vao hitan’ny mpiara-miasa.
Nisy mpiasa efatra hafa niharan’ny vono, toy izao ihany koa, sahy mijoro vavolombelona. Manantena ny fitsarana tena hanao ny asany ireo niharam-boina, mba tsy hitohizan’ny tranga mpahazo ny mpiasa malagasy toy izao.